Web Address ကို Password ခံမယ် - အမေ့သားလေး.... @ mixxt
အမေ့သား ၏ ဧည့်ခန်းငယ်
အမေ့သား လေး နေဇော်ထွေး .. ဘလော့ သို့............
web page များ တံတားလေး
ကျွန်တော့်၏ ....ဖိုရမ် ထဲသို့ ......စပ်စုနိုင်ပါသည် ။ ဟိဟိ
forever ဆိုဒ် ဖဖ
flight ဈေးနှုန်းနှင့် ဆိုင်သော .....
ဥုးသုမင်္ဂလ (မင်္ဂလတိုက်သစ် - ဒယ်အိုးဆရာတော်)
မဟာစည်ဆရာတော်ဘုရားကြီး ဦးသောဘန မဟာသာရ
ဒေါက်တာ အရှင်ဇယတိဿ (သစ္စာပါရမီ ဓမ္မရာဇာ တရားရိပ်သာ)
ပိုင်းလော့ ဆရာတော် အရှင်ဇေယျပါဏ္ဍိတ (မိုးညှင်း သိင်္ဂီ ကျောင်းတိုက်)
အောင်ဆန်းဆရာတော် (မိုးကုတ် မဟာကမ္မဋ္ဌာနာစရိယ)
ရွှေမင်းဝံဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တသောဘန
ဆရာတော် အရှင်ရေ၀တ (ဖားအောက်တောရ ကမ္မဋ္ဌာနာစရိယ)
ပခုက္ကူ ဆရာတော်ဘုရားကြီး ဘဒ္ဒန္တ ဣန္ဒောဘာသ
တောင်တန်းသာသနာပြု ဆရာတော်ဘုရားကြီး ဦးဥတ္တမသာရ
အသုံးပြု၇န် လင့်ကလေးများ ............ဒီနေရာမှာ........ရှာပါ
ဗုဒွဘာသာ တရားတော်မျာနှင့် ဦးမြင့်လွှင် .
ဆရာမလေး ဒေါ်မေသက် ၏.......
သမီးလေးကို ပြောပြတဲ့ ပြိတ္တာတွေအကြောင်း
fomat factory converter
G talk ဒေါင်းရန်...
G mail ဖွင့်ရန်
ဗွီဇက်အို ဒေါင်းချင်သူများ 6.3
pfingo သို့ ၀င်မယ်....
teamviewer download လုပ်မယ်..
Web Address ကို Password ခံမယ်
ဒီနည်းလမ်းလေးကတော့ ကျွန်တော်တို့ ဖော်ပြလိုတဲ့ Website လိပ်စာကို Password ကို အသုံးပြုပြီး ၀င်ရောက်စေလိုတဲ့ သူတွေအတွက် အသုံးဝင်တဲ့ နည်းလမ်းလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်.....Web Address ကို Password အသုံးပြုဖို့အတွက် ဒီနေရာ ကို သွားလိုက်ပါ....ပြီးရင် အပေါ်ဆုံးအကွက်မှာ မိမိ Password ခံလိုတဲ့ Web Address ကိုထည့်လိုက်ပါ...ဒုတိယ Password နေရာမှာတေ့ မိမိအသုံးပြုလိုတဲ့ Password ကိုထည့်ပါ့မယ်....
တတိယ Cute အကွက်မှာတော့ မိမိဖော်ပြလိုတဲ့ နာမည် ဖြစ်ဖြစ် အကြောင်းအရာ တစ်ခု ဖြစ်ဖြစ် ဖော်ပြနိုင်ပါတယ်......အားလုံးဖြည့်ပြီးသွားတာနဲ့ Shorten ဆိုတဲ့ Button ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ အစိမ်းရောင် အကွက်ကလေးနဲ့ Short URL လေးရပါလိမ့်မယ်....
ရလာတဲ့ Short URL ကို အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် Password အသုံးပြုပြီးသား ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်.......Web Address ကို Password ခံလိုသူတွေအတွက် အဆင်ပြေမယ် ထင်ပါတယ်.......
အမေ့သား လေး နေဇော်ထွေး ......
ရင်ဘတ်ထဲမှာ နေဆယ်စင်းထွန်းလင်တောင်လောင်နေသလား ငါမတွေးတက်… သေချာတစ်ခုက မင်းအကြည့်စိမ်းစိမ်းလေးတွေက ငါရင်ကိုနာကျင်စေတာအမှန်ပဲ ခင်တွယ် နေတဲ့ဒို့နှလုံး ဟာ အညွန့်တွေတလူလူ တက်နေတဲ့…ချစ်နွယ်လေးကို မင်းမရှိရင် ဘယ်လို အသက်ရှင်အောင် စိုက်ပျိုးရမလည်းနော်…… နေဇော်ထွေး(ခေတ္တ-ချင်းမိုင်)
Member since: 08/08/2011
Posts written: 108
Latest post: 18/09/2011
မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်း အပိုင်း များ...
တရားစာအုပ်များ..နှင့် ပိဋ္ဋကက် ၃ ပုံ PDFဖြင့်
ဂျီမေလ်းပက်ဝေါ့ကိုဘယ်လိုဖောက်မလဲ ( Gmail Fack Login ) ပြူလုပ်နည်း
Created by အမေ့သား လေး နေဇော်ထွေး ...... on mixxt.